Wakiilka Gareth Bale Oo Kooxaha Doonaya Ku War Galiyay Qiimaha Lagu Heli Karo Xiddiga – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta Wakiilka Gareth Bale Oo Kooxaha Doonaya Ku War Galiyay Qiimaha Lagu Heli Karo Xiddiga
Wakiilka Gareth Bale Oo Kooxaha Doonaya Ku War Galiyay Qiimaha Lagu Heli Karo Xiddiga
Wakiilka xiddiga garabka weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa sheegay qiimaha uu u qalmo xiddiga uu wakiilka u yahay.
Wakiilka xiddiga reer Wales ee Jonathan Barnett ayaa wargayska Tuttosport u sheegay qiimaha lagu heli karo xiddiga uu wakiilka u yahay ka hor inta uuna markii dambe sheegin uu Bale aad ugu faraxsan yahay kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu.
Wakiilka Gareth Bale ayaa sheegay in xiddiga garabka ka ciyaara Real Madrid uu qiimihiisu yahay 222 milyan isla markaasna la qiimo yahay xiddiga kooxda Paris Saint-Germain oo isla qiimahaas uga tagay kooxda Barcelona xagaagii la soo dhaafay.
Neymar ayaa lacag rikoorka suuqa kala iibsiga ah ugu biiray kooxda PSG kaas oo ka yaabiyay adduunka laakiin Barnett ayaa rumaysan in Bale lagu helayo lacag la mid ah midaas hadii uu kooxda Real Madrid uga tagayo koox kale.
“Waxa uu u qalmaa ugu yaraan 222 milyan euro sidii Neymar,Laakiin Gareth waxa uu si aad ah ugu faraxsan yahay kooxda Real Madrid”ayu Barnett yiri.
“Wuxuu jecel yahay Madrid. Gareth uma baahna Cristiano Ronaldo inuu baxo, waa ciyaaryahan ka mid ah xiddigaha Real Madrid. ”
Bale ayaa dhexda uga galay dhaawacyo xn wakhtigiisa caasimada Spain isaga oo awoodi waayay in uu boos joogto ah ka helo kooxda Zinedine Zidane.
Waxa uu kaliya xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid u saftay 20 kulan isaga oo dhaliyay 9 gool sidoo kale caawiye ka noqday 5 kale.